दशैंमा सबैभन्दा भिन्न र सुन्दर देखिन चाहनुहुन्छ ? मेकअप आर्टिस्टका यी टिप्स अपनाउनुस् | Ratopati
personसरिता कार्की exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २७, २०७५ chat_bubble_outline0
तर मेकअपका केही तौरतरिका हुन्छन्, जुन प्रयोग नगरेको खण्डमा अनुहार भद्दा देखिनुका साथै छालामा समेत नकारात्मक असर पुग्ने गर्छ । मेकअप गर्दा के गर्ने, के नगर्ने र यसको प्रक्रियाबारे मेकअप आर्टिस्ट स्वस्तिका राजभण्डारीले रातोपाटीसँग कुरा गरेकी छिन् ।
यदि फेसियल क्लिन्जिङका लागि पार्लर जान सम्भव छैन भने विभिन्न घरेलु तरिका अपनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि बेसनमा बेसार र अलिकति काँचो दूध मिसाउनुहोस् र एउटा पेस्ट तयार गर्नुहोस् । त्यसलाई राति सुत्नुअघि लगाउनु होस् र १५, २० मिनेट यत्तिकै छोड्नुहोस् । सुकेपछि औंलाको टुप्पाले हल्कासँग रगड्नुहोस् । यसले घामले डढेको छालामा पनि चमक ल्याउनुका साथै स्वस्थ बनाउँछ । यो विशेषगरी डार्क सर्कल (आँखामुनिको कालो) का लागि निकै उपयोगी हुन्छ ।
१. अनुहार सफा राख्नुहोस्ः
२. त्यसपछि लगाउनुहोस् मोइस्चराइजिङ लोसन र सनब्लकः
३. किन लगाउने प्राइमर ?
प्राइमरले अनुहारमा मेकअपका लागि एउटा बेस बनाइदिन्छ । यो लगाएपछि अनुहारमा छुट्टै ग्लो आउँछ र फाउन्डेसनलाई धेरैबेरसम्म टिकाइराख्छ । यसले अनुहारलाई केकी (फाउन्डेसन अत्यधिक पोतेकोजस्तो) देखाउँदैन । प्राइमरले अनुहारलाई चिल्लो बनाइदिने भएकाले फाउन्डेसन लगाउन निकै सजिलो पनि हुन्छ ।
४. त्यसपछि गर्नुहोस् आँखाको मेकअपः
५. फाउन्डेसन लगाउनुहोस्ः
मेकअप गर्दा नेपाली नारीले कस्ता गल्ती गर्छन् ?
यस्तै, आँखाको मुनि गाजल लगाउनेहरूले त्यो नबगोस् भन्नका लागि पाउडर लगाउने गरेको पाएँ । तर हामीले यसको साटो नटल्किने (म्याट) आइस्याडो एयर बडको सहायताले आँखामुनि लगाउन सक्छौं । जस्तै हरियो कुर्ता लगाएको छ भने आँखाको माथि न्युट्रल सेड गरेर मुनिपट्टी हल्का हरियो रङले सेड गर्न सक्छौं । तर रातो लुगा लगाएको छ भने आँखामुनि रातो नलगाउनुस्, कसैले कुटेको जस्तो देखिन्छ ।
रातो लुगा लगाएको खण्डमा आँखाको अघिल्तिर सिल्भर कलर, स्याम्पेन कलर अथवा सेतो कलर लगाउन सकिन्छ र आउटर कर्नर (आँखाको बाहिरी भाग) मा म्याटमा ‘रेडिस ब्राउन’ अथवा ब्ल्याकले डबल सेड दिन सक्छौं ।